Barnaamijyada Cimilada - Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Kobcinta Dhaqaalaha|Energy|Cimilada iyo Waxtarka Tamarta
Waa maxay cimilada hawadu?
Macluumaad guud oo dheeri ah oo ku saabsan waxa Barnaamijka Cimilada ay bixiso, fadlan eeg kaayaga CliENT Education Guide (PDF).
Gurigayga ma heli karaa cimilo ahaan?
Ganacsi si toos ah cimilada uma saarto. Waxaan qandaraas la leenahay wakaaladaha maxalliga ah ee magaaladaada ama degmadaada oo cimilada saaraya guryaha dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa dabaqadda hooseeya.
Ka raadi goobtaada khariidada hoose oo guji meesha ugu dhow ee buluugga ah si aad macluumaad uga hesho bixiyaha cimilada ee deegaankaaga.
Si aad u aragto haddii aad u-qalanto kaalmada cimilada, wac hay'adda maxalliga ah ee kuugu dhow Liiska Wakaaladda Cimilada.
Sidee loo maalgeliyaa barnaamijyadan?
Ganacsigu wuxuu dhaqaale ka helaa Gobolka Washington iyo barnaamijyada soo socda ee dowladda federaalka ah si looga caawiyo bixinta kharashka shaqada cimilada hooseeya:
Barnaamijka Caawinta Cimilada - Waaxda Tamarta ee Mareykanka
Maamulka Awooda Bonneville (BPA)
Barnaamijka Caawinta Tamarta Guriga ee Dakhliga Hoose (LIHEAP) (Adeegyada Caafimaadka iyo Aadanaha ee Mareykanka)
Ganacsigu wuxuu sannad walba codsan karaa ka-dhaafid si loogu wareejiyo illaa 25 boqolkiiba barnaamijyada Kaalmaynta Tamarta ee LIHEAP ee loo heli karo Barnaamijka Caawinta Cimilada. Ansixinta codsigan tanaasulka ee sanadka 2019 wuxuu kordhin karaa maalgalinta cimilada ee la heli karo $ 5,789,570 waxayna kordhin kartaa wareejinta lacagaha Barnaamijka Caawinta Tamarta ee LIHEAP oo ka yimid 15 boqolkiiba ilaa 25 boqolkiiba.
Waxaan haynaa ogolaanshaha HHS illaa iyo boqolkiiba 25 boqolkiiba wareejinta sanadkaan markale. Tani waxay keenaysaa dhammaan lacagaha LIHEAP ee iman kara Gobolka Washington, iyagoo siinaya fursad hay'adaha si ay u xoojiyaan barnaamijyadooda iyo maalgelinta jirta. Barnaamijyada Gargaarka Tamarta ee LIHEAP ayaa go'aamiya xaddiga saxda ah ee wareejinta la oggolaaday ee aaggooda iyadoo lagu saleynayo baahidooda maaliyadeed.
Gobolka Washington, shirkadaha yutiilitida ee iibiya gaaska iyo kuleylka korontada sidoo kale waxay bixiyaan lacag u dhiganta qoysaska dakhligoodu hooseeyo ee aqoonta leh. Waxaa jira lacag u dhiganta Doolarka gobolka Washington iyada oo loo marayo Barnaamijka Ciyaaraha.
Dhammaan hay'adaha maxalliga ah ee adeegyada ka bixiya Barnaamijka Cimilada Gobolka Washington waxay ku soo wargeliyaan natiijooyinkooda iyada oo loo marayo Nidaamka Xogta Xogta Cimilada (WIDS). (WIDS waa la ilaaliyaa amniga waxaana isticmaali kara oo kaliya hay'adaha maxalliga ah iyo shaqaalaha ganacsiga.)
Ma u baahan tahay caawimaad la siiyo CARRUURTA? Ka wac khadka taleefanka ee WIDS (360) 259-4749.
Bishaaro wanaagsan u ah milkiilayaasha guryaha miyiga ah ee la halgamaya hagaajinta guryahooda! Waaxda Ganacsiga ayaa daah furtay Barnaamijka Amaah Dhaqan-celinta Dakhliga Hoose ee Dakhliga-yar!
Dhammaan faahfaahinta tag annaga Barnaamijka Amaahda Dayactirka Guriga .
Sheekooyinka Guusha ee Hay'adaheena
"Waxaan jeclaan lahayn inaan kaaga mahadcelino wax walba oo gurigeenna lagu qabtay; heer kulku waa joogto, uma baahnin inaan biyo badan lumino ka hor intaysan kululaan! Kulluleyd dambe kuma sii jiri doono musqusha. Daaqadaha cusubna, qolka fadhiga waa ka raaxo badan yahay! waxaas oo dhami waa hadiyad la yaab leh! "
ClientGolaha Waxqabadka Bulshada ee Douglas
“Waxay ahayd wax cajiib ah inaan arko dhammaan waxyaabaha isku soo uruurinaya si gurigeygu aad ugu fiicnaado oo aan u ogaado inuu ka dhigay inuu sii dheeraado. Xaqiiqdii waxaa jira isbeddel ku yimid biilkeena tamarta iyo isticmaalka korontada. Kuleylka halkan ku jira wuxuu ku sii jirayaa heer-kul ka siman sidii uu ahaan jiray. Kuleyliyaha maahan inuu shaqeeyo waqti dheeri ah isagoo gujinaya isla markaana daminaya si joogto ah si uu halkan ugu diiriyo. ”
“Barnaamijku runtii wuxuu noo suuro galiyay inaan ka dhigno gurigeena mid sii socda, runtii, inta nolosheena ka hartay,” ayuu yiri Orville. "Haddii aan 30 sano oo dheeraad ah ka maqnaanno haddii ay ahaan lahayd, waan farxi doonnaa."
Orville iyo PerryMacmiil Barnaamijka Seattle HomeWise
“Waxaan toosi lahaa ilaa iyo 50 digrii subaxdii waxaanan heli lahaa meesha ilaa 63. Hada waxaan dhigay thermostat-keyga cusub markaan soo toosona durba waa ay raaxeysaneysaa oo sidaas ayey ku sii jirtaa. Biilashaydu way ka yar yihiin kuwii hore waxaanan dareemayaa badbaado inaan kulayliyaashaas ku xidhnayn. ”
Degane DallesportMacmiilka Barnaamijka Waxqabadka Washington Rorge
Shaqada ay qabatay waaxdaadu, gurigeygu wuxuu awood u yeelan doonaa kuleylka aan awoodo si hufan. Mar dambe kama sii fiirsan doono cabsi aan ka qabo bilaha dheer ee cimiladu aad u qabow tahay halkan Tahuya. Mar labaad, mahad kal iyo laab ah. "
ClientTahuya, WA (Gobolka Mason ee miyiga ah)
Xaaskeygu waxay awoodday inay yareyso qaar ka mid ah daawooyinkeeda. Waan ku faraxsanahay. Waxa kaliya oo aan u dhimanayaa inaan dilo caafimaadkeeda dartiis! ”
Wiley dhowWapato, WA
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan qaboobaha la galno foorno cusub. Waan ogahay inay ka diirimaad badnaan doonto. Waan ku faraxsanahay inay sidan noo sameynayaan waxna nagama dhimayso. ” Wax dheeri ah baro
Glenda VoelkerMacmiilka SNAP (Wada-hawlgalayaasha Waxqabadka ee Xaafadda Spokane)
Sheekooyinka Guusha Cimilada
SNAP (Wada-hawlgalayaasha Waxqabadka ee Xaafadda Spokane) (PDF)
Golaha Waxqabadka Bulshada - Lewis, Mason, Degmooyinka Thurston (PDF)
Magaalada Seattle - Barnaamijka HomeWise (PDF)
Golaha Fursadaha (PDF)
Horumarinta Bulshada Clark County (Erey)
Barnaamijka Waxqabadka Bulshada ee Olimbikada (Erey)
Macluumaadka loogu talagalay qoysaska dakhligoodu hooseeyo
Miyaan xaq u leeyahay caawimaad? (PDF)
Ayaa bixiya Cimillada Dakhliga-hooseeya ee Washington (Gobol ahaan)? (PDF)
Barnaamijka Caawinta Tamarta Dakhliga-hoose (LIHEAP)
Tilmaamaha Waxbarashada Macmiilka (PDF)
Xiriirinta Macluumaadka Barnaamijka Dheeraadka ah
Weatherization Plus Caafimaadka
Dukumintiyada Barnaamijka Cimilada
CUSUB - Barnaamijka Amaahda Dayactirka Guriga
Khariidadda Hawada ee Shaqaalaynta Cimilada
Gov. Jay Inslee wuxuu ku dhawaaqay Oktoobar 30 2020 Maalinta Cimilada
U dir emayl: Paul Currington
Caawinta naasnuujinta (wakaaladaha kaliya)
Khadka Tooska ah ee WIDS, (360) 259-4749
Kormeeraha Barnaamijka Sare & Kormeeraha
Khariidadda Hawada ee Shaqaalaynta Cimilada ee Gobolka Washington
Jaamacadda Washington State University waxay soo saartay Khariidadda Cimilada Cimilada ee Gobolka Washington. Warbixinta ayaa qeexeysa caqabadaha muhiimka ah ee xoogsatada ee wajahaya hay'adda barnaamijka dakhliga hoose ee Washington ee loo-shaqeeyayaasha iyo qandaraasleyda hoose. Qariiraddu waxay sidoo kale bixisaa xalal suurtagal ah iyo ficillo kor u qaadi kara helitaanka, diyaarinta iyo horumarka socda ee xirfad-yaqaan cimilada ee gobolka Washington. Cilmi-baaristii ugu dambeysay waxay muujineysaa in baahida loo qabo shaqo-ku-oolnimada tamarta la xiriirta, oo ay ku jiraan cimilada, ay si weyn uga badatay helitaanka
Macluumaadka Magazine Magazine Weatherization Plus Health Partnership
Had iyo jeer way fiicantahay in aqoonsi loo helo shaqadeena, gaar ahaan markay fikradaheena la wadaagto dhagaystayaal ballaadhan. Qaybaha Tamarta ee Cimilada-Dakhliga-yar ee dadaalka Cimilada iyo Daryeelka Caafimaadka ayaa helay qiyaas wanaagsan oo daboolis ah bishaan maqaal dabool ah Maarso 2019 Healthy Indors Magazine. Maqaalka wuxuu cadeeyay iskaashiga hal-abuurka ah ee ka dhexeeya barnaamijkeena cimilada maxaliga ah ee Adeegyada Aadanaha ee Pierce iyo Hawo Nadiif ah oo loogu talagalay Carruurta Neefta
Cimilada Cilmiga ah ee Cilmiga Cilmiga leh ayaa ku kasbaday Soo-gaadhista Qaranka ee Qaabka iyo Iskaashiga
Waxay ahayd bilow mashquul ah oo loogu talagalay 2019 barnaamijka Ganacsiga Weatherization Plus Caafimaadka. Waxaan kaqeyb galnay dhowr gole goboleed iyo heer qaran waxaana wadaagnay qaab dhismeedka iyo natiijooyinka shaqadeena Plus Health ee bixineysa guri waara iyo hagaajinta caafimaadka macmiilka. Diisambar 17, Vince Schueler, oo ah bahwadaagtayada Qiimeynta Barnaamijka Tamarta ee WSU, ayaa natiijooyinka qiimeynteenna la wadaagay Kooxda Hawlaha ee Vermont, Connecticut, iyo barnaamijyada cimilada ee New York ee ka shaqeeya horumarinta